Kulan ay isugu yimaadeen Culimo, Siyaasiyiin, waxgarad oo maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho, | Anti-Tribalism
← Dastuurka qabyo qoraalka aayan la jaan qaadi karin laguna dhaqi karin umada somalida dhaqankeeda,diinteeda iyo dadnimadeeda
Cali Geedi : DKMG Ah Waxa Looga Baahanyahay In Dastuur Cusub Ay Dadka Fahansiiso Ka Hor Inta Aysan Ansixin →
Guddoomiyaha Hay’adda Culumadda Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ka hadlayey kulankaasi ayaa ka hadlay aragtidooda ku aaday Dastuurka Xukuumadda KMG Soomaaliya ay sheegtay in la dhamays tiray, waxa uuna beeniyay Sheikh Bashiir in Dastuurka uu yahay mid qabya ah oo ilaa iyo iminka la dhameystirin halka Dowladda Soomaaliya ay iyaduna ka shaacisay in Dastuurka ay dhameestireen islamar ahaantana wax yar ay ka badaleen
Si kastaba ha ahaatee Sheekh Bashiir Axmed waxa uu tibaaxay in dastuurka uusan ku imaan hab lagu talagalay ama laga qeyb galiyey dhammaan bulshada Soomaaliyeed , wuxuu intaa ku daray in dastuurka ay hormuud ka noqdeen Hay’ado iyo shaqsiyaad uu sheegay inay ajnabi yihiin maalgalintana ay iyagu leeyihiin, Sheikh Bashiir iyo Siyaasiyiinta kulanka ka hadashay ayaa qalink ku duugay maanta in Dastuurkaasi uu yahay mid lagu sameeyay mala awaal islamarkana lagu doonaayo in lagu raali galiso dowladaha Galbeedka hayeeshe ay qalinka ku duugen in uunan ka shaqeyn doonin Dalka soomaaliya, waxa ayna sheegen hadii la dhaqan galiyo Dastuurkaasi ay ka dhalan karto Foodo aan laga kabsan.
Si kastaba ha ahaatee Sheekh Bashiir Axmed waxa uu tibaaxay in dastuurka uusan ku imaan hab lagu talagalay ama laga qeyb galiyey dhammaan bulshada Soomaaliyeed , wuxuu intaa ku daray in dastuurka ay hormuud ka noqdeen Hay’ado iyo shaqsiyaad uu sheegay inay ajnabi yihiin maalgalintana ay iyagu leeyihiin, haddaba dawladda qeelodhaan ayee ku jirtaa si ee maalgelin ugu hesho meelmarinta dastuurka sida ku cad hadalka ka soo yeeray Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya . Sheikh Bashiir iyo Siyaasiyiinta kulanka ka hadashay ayaa qalink ku duugay maanta in Dastuurkaasi uu yahay mid lagu sameeyay mala awaal islamarkana lagu doonaayo in lagu raali galiso dowladaha Galbeedka hayeeshe ay qalinka ku duugen in uunan ka shaqeyn doonin Dalka soomaaliya, waxa ayna sheegen hadii la dhaqan galiyo Dastuurkaasi ay ka dhalan karto Foodo aan laga kabsan.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in Caalamku ay la daaheen dhaqaalihii lagu fulin lahaa Roadmap-ka
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, C/weli Maxamed Cali ayaa sheegay in xukuumaddu ay dadaal ugu jirto dhameystirka Roadmap-ka oo ah jidkii looga bixi lahaa xilliga KMG ah, balse wuxuu sheegay in beesha calaamka ay ka gaabisay bixinta dhaqaalihii lagu fulin lahaa heshiiskan.
“Xukuumadda KMG ah dadaal badan ayay gelisay sidii uu ku fuli lahaa Roadmap-ka, balse beesha calaamka ayaa waxay ka gaabiyeen inay bixiyaan dhaqaalihii lagu fulin lahaa heshiiska, inkastoo ay dhinaca siyaasadda ka taageereen heshiiskan,” ayuu yiri ra’iisul wasaare C/weli.
Ra’iisul waasaraha oo ka hadlayay inay jiraan dad kasoo horjeeda dastuurka ayaa wuxuu sheegay in taasi ay sababtay aqoon-darro, balse loo baahan yahayy in si dhab ah loo eego qodobbada dastuurka.
Dhanka kale, mar uu ka hadlayay soo xulidda xildhibaannada baarlamaanka ayuu sheegay inay taasi u xilsaaran yihiin hoggaamiyeyaasha beelaha Soomaalida, isagoo sheegay inaan la ogolaan doonin mas’uul aan la isku raacsanayn oo beelaha ka tirsan inuu qayb ka noqdo xubnaha soo xulaya mudanayaasha cusub.
Jeneral Yuusuf Max’ed Siyaad Indha-cadde ayaa maanta hadalkii ugu kululaa ebid warbaahinta muqdisho umariyay Ra’iisul wasaare Gaas iyo golahiisa Wasiirada waxa uuna sheegay in ay doonayaan in ay dalka ku qabsadaan afgambi, isagoo dhinaca kale ku baaqay banaanbaxyo ka dhan ah Dasuutka dhawaan lagu ansixin doono Magaalada Muqdisho.
“Dastuurka sida loo qorsheynayo haddii loo sameynayo waa si ay faa’iido ugu jirto Puntland, wax yar ayaa kaga dhiman in ay tiraa waxaan wakiilo ku yeelaneynaa dibedda wakiiladaasoo barbar socda kuwa dowladda federaalka, Puntland been yeysan noo sheegin waan go’nay ha tiraa oo sida Somaliland ha cadeystaan, annaga xittaa waan ugu faataxeyneynaa in ay tagaan, batroolaa sheegtee ha laga helo macdanta adduunka ugu qaalisan” ayuu yiri mid ka mid ah dadkii dooda ka qeybgalay wuxuuna xusay in sed bursigu yahay kan araxda jebiyey in Soomaaliya ay hesho.
Hay’adda Culummada Soomaaliyeed oo dhaliishay Dastuurka Cusub ee Soomaaliya dalbatayna in Ansixintiisa dib loo dhigo
Sabti, Abriil 28, 2012 (HOL) — Hay’adda culumada Soomaaliyeed ayaa dhaliil u soo jeedisay dastuurka cusub ee Soomaaliya; iyadoo sheegtay inuu yahay mid dayacaya diinta iyo dalka isla markaana aan la jaanqaadi karin wayiga ka jira dalkeenna.
Bayaan ay hay’addu soo saartay maanta oo Sabti ah ayay sidoo kale ku xustay in xubnaha hormuudka ah ka ah qoraalka dastuurka aysan ku imaan habkii lagu talogeliyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.
“Qabo-qoraalka dastuurka waxaa hormuud ka ah hay’ado iyo shakhsiyaad ajnabi ah maadaama ay iyagu yihiin kuwa maalgelinaya,” ayaa lagu yiri bayaanka ay soo saartay ha’yadda culummada Soomaaliyeed.
Sidoo kale, bayaanka waxaa lagu xusay in culummada Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda ku firirsan laga tagay oo aan laga talogelin; taasoo ay ku sheegeen inay tahay mid ula-kac ah oo loogu talo-galay si loo marin habaabiyo ummadda Soomaaliyeed.
Hay’addu waxay sheegtay inaan talo laga weydiin qoraalka dastuurka shacabka Soomaaliyeed iyo gobollada dalka oo dhan, taasoo ay ku sheegeen inay tahay mid huwan aqoonsiga kala go’a Soomaaliya iyagoo taas ku sheegay mid khatar ah.
“Xalka Soomaaliya kuma imaan karo qoraallo lagu muransan yahay ee bulshadu waxay u baahan tahay dib-u-heshiisiin, kalsooni dhisid iyo maamul hagaagsan. Sidoo klae blushadu waxay u baahan tahay in la siiyo fursad ay ku doorato habka ugu habboon ee ay ku dejisay karto dastuur ka tarjumaya himiladeeda, ilaalinayana dalkeeda iyo diinteeda,” ayaa lagu yiri bayaanka hay’addu ay soo saartay.
Hay’adda culummadu waxay si aad ah u dhaliishay cutubyo dastuurka ku jira kuwaasoo kala ah: cutubka 1-aad, qodobbadiisa 1-aad iyo 2-aad, cutubka 2-aad, cutubka 3-aad, cutubka 8-aad, cutubka 9-aad, cutubka 11-aad iyo cutubka 16-aad.
“Waxaa layaab leh in qodobbada aan la bedelin karin lagu daray in haweenku ay ka mid noqon karaan dhammaan hay’adaha dowladda, iyadoo qodobbada la bedeli karo lagu daray kuwa la xiriira diinta oo ku yaalla cutubka koowaad, qodobkiisa labaad,” ayaa lagu yiri bayaanka hay’addu soo saartay.
Ugu dambeyn, hay’addu waxay ugu baaqday dowladda KMG ah, beesha calaamka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed in la joojiyo mashruuca lagu ansixinayo dastuurka inta laga saxayo qodobbada ay culummadu dhaliileen, dadka Soomaaliyeedna fursad loo siiyo inay ka qaybgalaan habka lagu jaan-goynayo mustaqbalkooda dowladeed.
Hay’adda culummadu waxay soo jeedisay in isbedel mug leh lagu sameeyo axdi qarameedka KMG ah si waafaqsan shareecada islaamka, iyadoo loo noqnayo dastuurkii 1960-kii oo ah kii ay dadka Soomaaliyeed afti xor ah ku ogolaadeen.